अनुहारको तेस्रो किस्त? हाम्रो पुलिस र साहित्यिक जासूसहरूको। | वर्तमान साहित्य
संग पहिलो डेलिभरी एकदम भर्खरको, अब अगाथा क्रिस्टी क्लासिकको नयाँ फिल्म अनुकूलन, ओरिएन्ट एक्सप्रेस मा हत्या, यसले नयाँ अनुहार दिन्छ Hercule Poirot। त्यसैले म पुन: प्राप्ति गर्दैछु ती अनुहारहरू र पक्षहरू जुन फिल्म र टेलिभिजनले हाम्रो पुलिस अधिकारीहरू र साहित्यिक जासूसहरूलाई दिन्छ। मैले पहिले नै भनें कि त्यहाँ धेरै छन्, त्यसैले त्यहाँ अरु केहि छन्। यो लाजमर्दो कुरा हो कि यी धेरैजसो श्रृंखलाहरू हामी यहाँ आएका छैनन्, तर धेरै युट्यूबमा फेला पार्न सकिन्छ। अवश्य पनि, यस लेखमा अझै छविहरू छैनन् ताकि सबै कुरा उत्सुकतामा रहे।
प्रसिद्ध बेल्जियम जासूसको साथसाथै, हामीसँग छ आदम दलगिलेश, विधाको अर्को महान ब्रिटिश महिलाको, पीडी जेम्स, वा Scotman जस्तै दिग्गजहरु जोन रिबस र Nordic पुलिसका डीन, स्विडेनी कमिश्नर मार्टिन बेक। हामी उसका देशवासीहरूलाई "पनि" हेर्नेछौं फाल्क र हेडस्ट्रम, को जोडी Fjällbacka de क्यामिला लकबर्ग। र जर्मनहरू ओलिभर भोन बोडेन्स्टीन र पिया किर्चहफ, द्वारा बनाईएको Nele neuhaus. त्यहाँ एक तेस्रो बढी महँगो किस्त हुनेछ।
1 हरक्युल पोइरोट - पीटर उस्टिनोभ, अल्बर्ट फिननी, डेभिड सुचेत, केनेथ ब्रानाघ ...
2 एडम दलग्लिश - रोय मार्सेडन र मार्टिन श
3 जोन रेबस - जोन हन्ना र केन स्टट
4 मार्टिन बेक - पीटर हेबर
5 एरिका फाल्क र पैट्रिक हेडस्ट्रम - क्लाउडिया गल्ली र रिचर्ड उलफस्टर
6 ओलिभर भोन बोडेन्स्टीन र पिया किर्चहफ - टिम बर्गम्यान र फेलिसिटस वोल
हरक्युल पोइरोट - पीटर उस्टिनोभ, अल्बर्ट फिननी, डेभिड सुचेत, केनेथ ब्रानाघ ...
सूची अभिनेताहरूको जसले विशेष र धेरै बुद्धिमान बेल्जियम जासूसलाई आफ्नो शरीर देह दिएका छन् लामो छ। सायद राम्रो अनुहारको लागि परिचित छ टिभी श्रृंखला ब्रिटिश हो डेभिड सक्थे। उसले बनाएको मनोरञ्जन भन्दा उसको पाइरोट कम प्रभावित छ अल्बर्ट फिन्नी को 1974 संस्करण मा ओरिएन्ट एक्सप्रेस मा हत्या। र यो पनि भन्दा गम्भीर छ पीटर उस्टिनोभ सूर्य अन्तर्गत मृत्यु (१ 1982 XNUMX२)। साथै उनको पोइरोट पनि मानिन्छ सबैभन्दा विश्वासी अगाथा क्रिस्टीका पुस्तकहरूलाई, जसको परिवारले उनको भूमिकाका लागि सिफारिस गरेका थिए। उसको अन्तिम अनुहार हो केनेथ ब्रानाघ.
एडम दलग्लिश - रोय मार्सेडन र मार्टिन श
सबै उपन्यासहरू पीडी जेम्स मा कमाण्डर स्कटल्याण्ड यार्ड एडम Dalgliesh टेलिभिजन को लागि अनुकूलित गरिएको छ। १ 1983 XNUMX मा ITV द्वारा शीर्ष दस रोय मर्सदेन शीर्षक भूमिकामा। त्यसपछि बीबीसीले अभिनेताको साथ यसलाई जारी राख्यो मार्टिन श.
जोन रेबस - जोन हन्ना र केन स्टट
इन्स्पेक्टर रेबस श्रृंखला को उपन्यास, द्वारा बनाईएको इयान रान्किन, एडिनबर्गमा अवस्थित छन् र कल गर्न आएका छन् Tartan noir। यसमा अनुहार राख्ने पहिलो व्यक्ति थियो जोन हन्ना, भित्र देखिएको चार विवाह र अन्त्येष्टि o आमा। तर २०० in मा उनले यो प्रतिस्थापन गरे केन स्टट, जो पात्रको उत्तम अवतारको रूपमा स्वागत गरिएको थियो। म स्टटको साथ बस्छु।
मार्टिन बेक - पीटर हाबर
Al बुबा र मोडेल उत्तरबाट आएका धेरै सफल पुलिस र जासूसी मध्ये एक, यो स्विडेनी लेखन दम्पतीले's० को दशकमा फेरि सिर्जना गरेको थियो। मेजर साजोवाल र प्रति वाहलू। र पक्कै पनि तिनीहरूले उसलाई आफ्नो श्रृंखला बनाउन थियो, बैक, जुन २० बर्ष र seतुहरु को लागी गरीएको छ। अनुभवी स्विडिश अभिनेता पीटर हाबर तपाइँको शरीर यस मा राख्छ।
एरिका फाल्क र पैट्रिक हेडस्ट्रम - क्लाउडिया गल्ली र रिचर्ड उलफस्टर
हामी अझै स्वीडेनमा छौं। जोडी द्वारा बनाईएको क्यामिला लकबर्ग को उपन्यास मा सानो तटवर्ती शहर मा सेट Fjällbacka एरिका फाल्क हो (क्लाउडिया गल्ली), एक जासूसी उपन्यास लेखक र पुलिस निरीक्षक पैट्रिक हेडस्ट्रमको पत्नी (रिचर्ड Ulfsäter)। द सेरी, को अपराध Fjällbacka, बाह्र 90 ०-मिनेट एपिसोडहरू समावेश गर्दछ।
ओलिभर भोन बोडेन्स्टीन र पिया किर्चहफ - टिम बर्गम्यान र फेलिसिटस वोल
वर्णहरू जर्मन द्वारा बनाईएको Nele neuhaus उनीहरूसँग दुईवटा अनुहारको साथ तिनीहरूको ZDF श्रृंखला छ जुन Taunus क्षेत्रका कुलीन पुलिसको साथ धेरै राम्रो फिट छ, ओलिभर भोन बोडेन्स्टीन, र आफ्नो दृढ साथी पिया किर्चहोफ। जसले पुस्तकहरू पढेका छन्, अनुकूलनहरू हिउँ सेतो मर्नै पर्छ, केही घाउहरू कहिल्यै निको हुँदैन, साथीहरू मृत्युसम्म y जो बतास छर्दछ, आँधीबेहरी बाच्दछ.
भेनिस आयुक्तसँग उसको टेलिभिजन श्रृंखला थियो Se मौसम। जर्मन च्यानल एआरडी द्वारा अनुकूलित, ब्रुनेट्टी कामको मुख्य पात्र हो डोना लियोनजसले उहाँलाई १ 90 XNUMX ० को शुरुमा सिर्जना गर्नुभयो। उनका पुस्तकहरू तेईस भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको छ। यहाँ हामी उनलाई भित्र देख्न सक्छौं2केहि वर्ष अघि र तिनीहरूले समय-समयमा यसलाई पुनः भरिन्थे। जर्मन अभिनेता Uwe Kockisch उसले एपिसोड from बाट यसमा आफ्नो अनुहार राख्यो।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » अनुहारको दोस्रो किस्त? हाम्रो पुलिस र साहित्यिक जासूसहरूको।
91 १ लेखकहरूले गेब्रियल गार्सिया मार्क्वेज हिस्पैनिक-अमेरिकी लघु कहानी पुरस्कारका लागि प्रतिस्पर्धा गरे